Gịnị bụ Cloud Monitoring & Olee otú ọ pụrụ inyere gị azụmahịa
Nleba anya igwe ojii bụ omume nke inyocha, nyocha na ijikwa ọrụ arụ ọrụ na akụrụngwa n'ime oghere igwe ojii. Ngwọta nlekota oru na-eleba anya na akụrụngwa igwe ojii niile ma nye ohere na njikwa etiti. Ọ dị mkpa iji nyochaa igwe ojii maka ụlọ ọrụ IT mgbe etinyere akụrụngwa na ogige igwe ojii yana dabere na ọrụ igwe ojii.
Nnweta dabere na ọrụ na-enye ndị admins ohere inyocha ọnọdụ ọrụ na ahụike nke okporo ụzọ igwe ojii na ihe. Ọ bụ ezie na igwe ojii na-enye ọnụọgụ ọrụ na-enweghị ngwụcha, ọ dị mkpa ịhazi usoro nlekota oru dabere na nhazi na akụrụngwa igwe ojii.
Enwere ụdị igwe ojii dị iche iche, dị ka nzuzo, ọha, na ngwakọ. A na-eji igwe ojii nkeonwe eme ihe na ụlọ ọrụ nzuzo ka ọ na-enye njikwa na ike dị ukwuu na ngalaba IT dị n'ime. Agbanyeghị, ka akụrụngwa nke nzukọ ahụ siri dị mgbagwoju anya yana dị iche, ka ọ na-adịkwa mkpa ka ọ na-eleba anya na idobe ọrụ ya na nchekwa nke ọma.
Kedu ihe ị ga-enyocha na Cloud?
Ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ileba anya na metrik niile nke ọrụ na-eme na ụlọ. N'elu nke ahụ, site na ọrụ igwe ojii dị, ihe omume ahụ nwekwara ike ịrụ ọrụ na ogige igwe ojii. Ozugbo nzukọ ahụ dabere na igwe ojii, enwere metrik dị iche iche iji nyochaa akụrụngwa igwe ojii. Azụmahịa, nchekwa, netwọkụ, ntinye ngwa, arụ ọrụ DevOps, wdg. Nke a bụ ụfọdụ ọrụ na igwe ojii nke ụlọ ọrụ kwesịrị inyocha.
Ngwa Ngwaọrụ: Ọ dịla mfe itinye ọrụ site n'enyemaka nke igwe ojii na igwe mebere. N'iji ọtụtụ ọrụ na igwe, ọ dị mkpa iji nyochaa akụrụngwa mebere na igwe mebere.
Nchekwa igwe ojii na ọdụ data: Ebe igwe ojii na-eme ka ọ dị mfe ịchekwa data n'agbanyeghị ebe ị nọ, ọ dị mkpa iji nyochaa akụrụngwa nchekwa data, nnweta, oriri na akụrụngwa.
Weebụsaịtị: Bochum webụsaịtị na igwe ojii bụ ihe a na-eme mgbe niile ugbu a. Ya mere, nyochaa okporo ụzọ, nnweta, na iji ihe onwunwe kwesịrị ịbụ ụkpụrụ omume iji nọgide na-enwe ahụmahụ dị mma nke onye ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-akwado igwe ojii.
Netwọk mepere emepe: Dị ka netwọk n'ime ụlọ, nlekota netwọk mebere, ngwaọrụ ejikọrọ, okporo ụzọ, ahụike netwọk na arụmọrụ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị a na-enyocha mgbe otu ụlọ ọrụ na-ahọrọ netwọk mebere.
Uru Uru Nlele igwe ojii
Nleba anya igwe ojii na-enyere òtù dị iche iche aka inye nghọta oge n'ime ngalaba dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a na-eme ka ọhụhụ dị n'ofe akụrụngwa ma mee ka netwọkụ, sava na ngwa na-agba ọsọ nke ọma. Ọ na-enye aka ịgwakọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke data ekesara n'ofe dị iche iche, soro okporo ụzọ na oriri nke igwe ojii na-akwado, chọpụta ihe ndị nwere ike ime, ma dozie otu ihe ahụ tupu ha emebie ihe ọ bụla na-enweghị ike imezi. Nke a bụ uru ole na ole nke nlekota ọrụ igwe ojii.
Ihe nchikota ndi ozo: Ngwa nlekota oru na-enye otu dashboard jikọtara ọnụ site na ebe ndị ọrụ nchịkwa IT nwere ike nweta nghọta na nzukọ ahụ dum ma lekwasị anya na ọrụ ọ bụla, azụmahịa, na nkwurịta okwu n'ofe netwọk. Ọ na-eme ka ọ dị mfe iji nyochaa ma jide n'aka na ahụmahụ onye ọrụ dị mma ma zere mmebi ọ bụla nwere ike ime.
Security: Otu n'ime isi ihe mere ị ga-eji nyochaa ihe omume na ígwé ojii bụ iji chekwaa akụrụngwa na-akwado igwe ojii. Site na ozi nwere mmetụta na data ndị ahịa, ọ dị mkpa ka ị ghara inwe mmebi data ọ bụla ma nọgide na-enwe ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Ileba anya igwe ojii nwere ike ime ka ụlọ ọrụ nweta nke ahụ.
Performance: Site n'enyemaka nke nlekota oru igwe ojii, ọ bụghị naanị na-enyere aka ịnọgide na-ahụ maka ahụike akụrụngwa kamakwa ọ na-enyere aka nyochaa azụmahịa azụmaahịa na metrik.
Ọhụụ: Nyochaa ọrụ igwe ojii na-enyere otu nzukọ aka itolite na akụrụngwa. Ngwa a na-achọrọ na-eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịgbakwunye sava ọhụrụ ma ọ bụ ebe arụ ọrụ n'onwe ha.
Omenala Mata: Ọ dị mkpa ka ụjọ jide gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe mejọrọ na nzukọ a. The nlekota ngwá ọrụ proactivity alerts admin otu banyere nwere ike ịbụ njehie. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nyocha na nlekota ihe na-akpata mgbọrọgwụ na-enyere ha aka ikpebi, ya mere, nzukọ ahụ nwere ike ịnye ahụmahụ dị mma nke onye ọrụ ma zọpụta ya na mmebi dị ize ndụ.
Ọrụ ígwé ojii bụ ihe onye ọ bụla ga-eme maka otu IT. Ugbu a, ihe na-esote bụ inyocha ihe omume iji jide n'aka na ihe niile a na-eme na-eme nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Nleba anya n'ozuzu ọ bụghị naanị na-enyere òtù dị iche iche aka ime ka ihe na-aga n'ihu kamakwa na-enyere ha aka itolite na nchekwa. AIOps nke Motadata kwadoro, ịbụ otu ngwa nleba anya dị elu na nke dị elu, nwere ike inyere ndị otu aka nyochaa ọrụ igwe ojii na mbugharị ha. Ọgbọ na-abịa AIOps na-eji teknụzụ dị ka ọgụgụ isi Artificial na mmụta igwe iji buru amụma njehie nwere ike ịtụ aro mgbanwe iji bulie ngwa ndị a.